Chitsva patent yeApple inoenderana neApple Watch uye korona yayo | Ndinobva mac
Mutsva patent yeApple inoenderana neApple Watch uye korona yayo
Iyo korona yedhijitari yeApple Watch hapana mubvunzo kuti chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo zvatinazvo muwatch uye ndezvekuti isu tinongova nemabhatani maviri pane mudziyo. Iye zvino patent nyowani yakatenderwa uye yakasimbiswa neApple inotiratidza iyo ingave iri mhando yemutungamiri wekutungamira mune yakasarudzika joystick maitiro senge iyo iine mamwe macomputer ekudzora, kuti uwane zano ratinogona kufunga nezveDualshock. Zvinonzwisisika muhukuru hushoma uye hwakashandisirwa mudziyo unopfeka waApple.
Kuva nechiratidziri paApple Watch chingave chinhu chatichaona mune ramangwana uye ndechekuti kunyangwe chiri chokwadi tiri pachena zvibodzwa hazviwanzo kupedzisira zvaitwa Pamidziyo, iyi mhando yewatch control inogona kuitiswa pane Apple smartwatch pane imwe nguva. Sarudza zvinhu, famba pakati pemamenyu kana kana kushandisa iri korona zvakanyanya zvisinei nekubata kwechidzitiro, ndidzo dzimwe dzesarudzo dzatingave nadzo kuwana kushandisa iyi patent.
Mufananidzo weiyo patent yakabvumidzwa inofananidzira uye iine korona yedhijitari yatinayo izvozvi sekuziva kwedu kuti yaizorasika. Chii chinoitika ndechekuti mhando iyi yekorona inogona kunge iri dambudziko pakuita kusazvibata kunomubata, sezvo mukana wekutamba nenguo refu-refu waizosimbiswa. Tichaona zvinozopedzisira zvaitika neiyi patent uye kana tikazviona zvichishandiswa muApple wachi mune ramangwana kana inoramba iri mune imwe patent yekutora
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mutsva patent yeApple inoenderana neApple Watch uye korona yayo
Australia yekupedzisira hombe bhangi inokanda Apple Pay
Comedy Mytic Quest: Raven's Banquet Premieres Kukadzi 7 paApple TV +